The Paradise, Maldives | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on September 14, 2015 September 14, 2015 by Nu Myat
စိမ်းပြာရောင်သန်းပြီး ကြည်လင်ရှင်းသန့်သော ရေပြင်၊ ဖြူလွှဝင်းပသော သဲသောင်ပြင်၊ သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသည့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော လေကောင်းလေသန့်၊ ရေပေါ်ရေအောက် လှပသော ရှုခင်းများ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာ ဆောက်လုပ်ထားကြသည့် အပန်းဖြေစခန်းဟိုတယ်များကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ စုံတွဲများ ပျားရည်ဆမ်းခရီး Honey Moon ထွက်ရာ၊ ကမ်္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ အနားယူအပန်းဖြေရာ ကျွန်းနိုင်ငံအဖြစ် နာမည်ကြီးနေသော Malvides (မော်ဒိဗ်စ်)နိုင်ငံအကြောင်းကို စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ဓာတ်ပုံများ၌သာ တွေ့ ဖူးပြီး သဘောကျနေမိခဲ့ပါသည်။ ထိုကဗျာဆန်သော နိုင်ငံသို့ တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန် ချိန်မှာ အရောက်သွားမည်ဟုလည်း စိတ်ကူးယဉ်မိဖူးခဲ့ပါသည်။
စိတ်ကူးထဲမှာ ရွက်လွှင့်သွားဖြစ်ခဲ့သော ထို Malvides နိုင်ငံသို့ Sun Far Travels & Tours ၊ Bangkok Airways နှင့် ထိုနိုင်ငံရှိ Club Med Kani ဟိုတယ်တို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ 2014 ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်မှ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အထိ စာရေး သူ သုံးရက်တာသွားရောက် လည်ပတ်လေ့လာခဲ့ရပါသည်။ Malvides နိုင်ငံနှင့် Club Med Kani ဟိုတယ် အကြောင်း မြန်မာမှာ ပိုပြီးသိရှိရင်းနှီးစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာမီဒီယာများကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဖြစ်ရာ စွယ်စုံမီဒီယာဂရု(ပ်) (The Chic Magazine) မှ ကျွန်မ ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦးနှင့်အတူ အခြား မီဒီယာများဖြစ်ကြသော Forever Group (MRTV-4) ၊ ရန်ကုန်မီဒီယာဂရု(ပ်) Inforithm Maze မီဒီယာ၊ Asia Fame မီဒီယာဂရု(ပ်)၊ မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ်၊ Travellers ဂျာနယ်နှင့် မန်္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတို့မှ မီဒီယာသမားများ သွား ရောက်လေ့လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
Malvides နိုင်ငံသည် အိန်္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်း အာရှတိုက်ထဲမှာရှိသော အာ ရှနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း မြန်မာခရီးသွားများနှင့် သိပ်ပြီး အကျွမ်းတ၀င်မရှိကြသေးပါ။ Malvides နိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအနေဖြင့် ဗီဇာမလိုအပ်သဖြင့် သွားလာရလွယ်ကူပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် Bangkok Airways လေကြောင်း ဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ Malvides သို့လေယာဉ်ပျံသန်းချိန်မှာ လေးနာရီကျော်သာ ကြာမြင့်ပြီး မြို့တော် Male (မာလေး)၏ ကပ်လျက်ကျွန်းရှိ လေဆိပ်မှ တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ ဟိုတယ်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် Speed Boat များဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ဘက် ၄၃၀ မိုင်အကွာနှင့် အိန်္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်တောင်ဘက် ၂၅၀ မိုင်အကွာ အိန်္ဒိယသမုဒ်္ဒရာ ထဲတွင် တည်ရှိနေသော Malvides နိုင်ငံသည် ကျွန်းပေါင်း ၁၁၉၂ ကျွန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကျွန်းနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းများအနက် ကျွန်းပေါင်း ၁၉၂ ကျွန်းပေါ်မှာသာ လူနေထိုင်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေမှာ စုစုပေါင်း ၃၉၀၀၀၀ ကျော်သာရှိသည်။ နိုင်ငံအကျယ်အ၀န်းမှာ ၁၁၅ စတုရန်းမိုင်သာရှိ၍ လူဦးရေအရရော အကျယ်အ၀န်းအရပါ အာရှမှာ အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံ၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရေပြင်ဖြစ်ပြီး ကုန်းမြေအမြင့်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၄ ပေ ၁၁ လက်မ အထက်သာမြင့်သဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြေမျက်နှာပြင်အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၇ ပေနှင့် ၁ လက်မခန့်သာရှိပါသည်။ ထိုသို့ မျက်နှာပြင်နိမ့်မှုကြောင့် များမကြာမီနှစ်များအတွင်း ပင်လယ်ရေအောက်ကို ရောက်ရှိသွားနိုင်သည့် နိုင်ငံအဖြစ်လည်း ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးခံရနိုင်သည့် တတိယ မြောက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ထိုသို့ သဘာဝအန္တရာယ်များသောကြောင့်လည်း Malvides နိုင်ငံသည် ကမ်္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်း များ ရေအောက်ရောက်မသွားခင်၊ သဘာဝအလှတရားများ ကွယ်ပျောက်မသွားခင် သွားရောက်လည်ပတ်လိုသောဆန်္ဒကြောင့် ကမ်္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ တစ်နေ့ တခြားများပြားလာရခြင်းဖြစ်၏။ ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဗြိတိသျှကိုလိုနီမှ လွတ်မြောက်ပြီး ကာလ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က စတင်ကာ ဟိုတယ်များဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဟိုတယ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိကြောင်းသိရ၏။ များသောအားဖြင့် ဟိုတယ်များကို တည်ဆောက်ရာမှာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို ဟိုတယ်တစ်ခုစီ ဆောက်ထားခြင်းသည်လည်း Malvides နိုင်ငံ၏ ထူးခြားချက်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။
ထိုကဲ့သို့ Maldives(မော်ဒိဗ်)နိုင်ငံ၏ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်များ၌ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော Club Med ဟိုတယ်သည် Kani(ကာနီ)ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးပေါ်၌ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်၍ မြို့တော် Male(မာလေး)အနီးရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ရှိရာကျွန်းမှ မိနစ် ၂၀ ကြာ Speed Boat ဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည်။ ဟိုတယ်၏ ၀န်ဆောင်မှုများအနက် လေဆိပ်မှ ဟိုတယ်သို့ အကြိုအပို့ပါရှိသည်ဖြစ်ရာ ဧည့်သည်များ လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်သည့်အချိန်၌ ဟိုတယ်မှ Speed Boat ဖြင့် ဧည့်သည်များကို ၀န်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးနိုင်ရန် ခန့်မှန်းထားသည့် G.O (Gentil Organisateurs)ဟု ပြင်သစ်လို အတိုကောက် ခေါ်သည့် ဖော်ရွေသော ဧည့်ကြိုများက လာရောက်ကြိုဆိုပေးပါ၏။
Club Med ဟိုတယ်၏ ထူးခြားချက်များအနက် ထို G.O များလည်း ပါဝင် ၏။ အထူးကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုကို အခြေခံထားသည်ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအတွက် ယဉ်ကျေးဖော်ရွေသော G.O များကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ခန့်ထားပြီး Club Med လူမျိုးပေါင်း ၂၂ မျိုးရှိကြောင်း သိရ၏။ ထို G.O များသည် ဧည့်ဝတ်ကျေရုံမျှမက အဆို၊ အက ပညာရပ်များ၌ပါ ကျွမ်းကျင်ကြသည် ဖြစ်ရာ ညတိုင်း ဧည့်သည်များ မပျင်းရလေအောင် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီဖြင့် တစ်နာရီကြာမျှ စင်မြင့်ထက်၌ ဖျော်ဖြေလေ့ရှိရာ တကယ့်ဝါရင့် အဆို၊ အကပညာရှင်များကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်ကြသည်ကို တွေ့ရ၏။
Club Med ဟိုတယ်၌ အခန်းအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိရာ ဈေးသက်သာ သော Superior Room ၁၃၅ ခန်း၊ ကမ်းခြေနှင့် ကပ်လျက်ရှိနေသည့် Beach Villa ၂၄ ခန်းနှင့် သမုဒ္ဒရာရေပေါ်ခြေတံရှည်အဆောင်များဖြင့် တည်ဆောက် ထားသည့် လူကြိုက်အများဆုံး Lagoon Suiteအခန်း ၇၅ ခန်းရှိကြောင်း သိရ၏။ မည် သည့်အခန်းမှာတည်းသည့် မည်သည့်ဧည့်သည်မဆို နံနက်စာ၊ နေ့လယ်စာနှင့် ညစာများကို နိုင်ငံတကာစားဖိုမှူးများ ချက်ပြုတ်ထားကြသည့် International ဘူဖေးနှင့် ပင်လယ်စာများ ကြိုက်သလောက် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် Sunset Bar နှင့်Iru Bar တို့၌ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ အအေး၊ ကော့တေး၊ ဘီယာ နှင့် အရက်မျိုးစုံကို ကြိုက်သည့်အချိန်၌ စိတ်ကြိုက်သောက်သုံးနိုင်သဖြင့် ဧည့် သည်များအတွက် အထူးအဆင်ပြေလှ၏။
ထို့ပြင် ကမ်းခြေ Activities များဖြစ်သည့် ရွက်လွှင့်ခြင်း၊ ရွက်လွှင့်သင်ခြင်း၊ လှေလှော်ခြင်း၊ သမုဒ်္ဒရာရေပြင်တွင်းရှိ ငါးများကြည့်ခြင်း(Snorkeling)၊ အက သင်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ ရေကူးကန်ထဲ၌ ဂိမ်းဆော့ခြင်း(Aqua Gym)အစီ အစဉ်များကို အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက် Resort မှာ အခန်းယူလိုက်သည် နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အပိုငွေတောင် ဆောင်စရာမလိုသည်အထိ အဆင်ပြေလှပါ၏။
အကယ်၍ လှေစီးခြင်း၊ Jet Ski စီးခြင်း၊ ရေအောက်ငုပ်ခြင်း(Scuba Diving)၊ ရေဘောလုံးအတွင်း ၀င်ကစားခြင်း(Water Ball)၊ သမုဒ္ဒရာအတွင်း သင်္ဘောစီးကာ နေ၀င်ချိန်အလှ ရှုစားခြင်း(Sunset Cruise)၊ မာလေးမြို့တော် သို့ သွားလည်ကာ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းနှင့် Spa၀န်ဆောင်မှုများ စသည်တို့ကို ပြုလုပ်လိုပါကလည်း အခကြေးငွေ ထပ်ဆောင်းကာ ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။
စုံတွဲများနှစ်သက်သည့် ရေပေါ် Suite အခန်းများ၏ ထူးခြားမှုများမှာ အခန်းများသည် ကြည်လင်သော စိမ်းပြာရောင် သမုဒ်္ဒရာရေပြင် ပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားခြင်း၊ အထူးလှပသော ရှုခင်းများကို အိပ်ရာထဲမှ မြင် တွေ့ရနိုင်ခြင်း၊ အခန်းထဲမှ ထွက်သည်နှင့် သမုဒ်္ဒရာထဲဆင်းနိုင်ရန် စီစဉ်ထား ခြင်း၊ ရှမ်ပိန်ပုလင်းနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ စိတ်ကြိုက်စားသောက်နိုင်ခြင်း၊ လှပဆန်းသစ်သော ဧည့်ဆောင်ရှိခြင်းစသည့်အချက်များပင် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့်လည်း ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ စုံတွဲများဧ။် Honey Moon Destination ဖြစ်လို့နေခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့ ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်ပြီး လှပသာယာသည့် Club Med Kani Resort သို့ သွားရောက်အပန်းဖြေလိုသူ မြန်မာခရီးသွားများအတွက် Bangkok Airways နှင့်Club med Kani တို့ပူးပေါင်းကာ အထူးသက်သာသော ဈေး နှုန်းများဖြင့် ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ခရီး package များကို စီစဉ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ပုံမှန်ဈေးနှုန်း အခန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ မှ ၂၅၀၀ ကျော်ရှိရာမှ Promotion ကာလများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ကျော်မှ ၁၉၀၀ ကျော်အထိ ဈေးလျှော့ပေးလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
This entry was posted in Adventure, Asia, Maldives, Natural Wonder, Travel and tagged adventure, Asia, Beach, Club Med Kani, Honey Moon Destination, India Ocean, Island, maldives, Nu Myat around the World, Ocean, Travel, Underwater. Bookmark the permalink.
← Nara, the sacred City of Japan Bowing Deers
My2days Jail Experience in Switzerland →
2 thoughts on “The Paradise, Maldives”